November 2017 - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Facebook Search မှာ ရှာဖွေထားတာကို သူများတွေမတွေ့အောင်ဖျက်နည်း
🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 •••ဖေ့စ်ဘုတ်စသုံးခါစ မိတ်ဆွေများနဲ့မသိသေးတဲ့ အစ်ကိုအစ်မတွေအတွက်ပါ။ ဒါလေးက တော့ သူများ Fb acc ဝင်မိတာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ် Fb a...
Facebook Search မှာ ရှာဖွေထားတာကို သူများတွေမတွေ့အောင်ဖျက်နည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 1:53 AM Rating:5🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 •••ဖေ့စ်ဘုတ်စသုံးခါစ မိတ်ဆွေများနဲ့မသိသေးတဲ့ အစ်ကိုအစ်မတွေအတွက်ပါ။ ဒါလေးက တော့ သူများ Fb acc ဝင်မိတာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ် Fb a...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 1:53 AM No comments:
Viber မှာ တစ်ဖက်က သူတွေမသိအောင် Hide ပြီး Chatနည်း
🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 •••Viber မှာ တစ်ဖက်က သူတွေမသိအောင် Hide ပြီး Chatနည်းပါ။လေ့လာလို့ရအောင် ပုံတွေနဲ့ညွန်းပါတယ်။အဆင်ပြေပါစေ။ ...
Viber မှာ တစ်ဖက်က သူတွေမသိအောင် Hide ပြီး Chatနည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 11:14 AM Rating:5🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 •••Viber မှာ တစ်ဖက်က သူတွေမသိအောင် Hide ပြီး Chatနည်းပါ။လေ့လာလို့ရအောင် ပုံတွေနဲ့ညွန်းပါတယ်။အဆင်ပြေပါစေ။ ...
Playstore မှာ this item isn't available in your country စာ​ပေါ်ပြီး install မ​ပေးတဲ့ App၊Game ​တွေကို ​ပေး​အောင်လုပ်​ပြီး​ ​ဒေါင်း​လော့ယူနည်း
🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 •••​ Playstore မှာ this item isn't available in your country ပြပြီး App ၊Game ​တွေ​ဒေါင်းခွင့်​မ​ပေးတာကို vnp ​ကေ...
Playstore မှာ this item isn't available in your country စာ​ပေါ်ပြီး install မ​ပေးတဲ့ App၊Game ​တွေကို ​ပေး​အောင်လုပ်​ပြီး​ ​ဒေါင်း​လော့ယူနည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 10:46 AM Rating:5🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 •••​ Playstore မှာ this item isn't available in your country ပြပြီး App ၊Game ​တွေ​ဒေါင်းခွင့်​မ​ပေးတာကို vnp ​ကေ...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 10:46 AM No comments:
​ဖေ့စ်​ဘုတ်​သုံး​နေရင်း Facebook isn't responding. Do you want to close it ပြတဲ့ပြဿ နာ​ဖြေရှင်းနည်း
🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 ••• ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​သုံး​နေရင်းFacebook isn't responding.Do you want to close it ပြတဲ့စာ ​ပေါ်လာပြီဆိုရင်​ အလွန်​စိတ်​...
​ဖေ့စ်​ဘုတ်​သုံး​နေရင်း Facebook isn't responding. Do you want to close it ပြတဲ့ပြဿ နာ​ဖြေရှင်းနည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:36 AM Rating:5🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 ••• ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​သုံး​နေရင်းFacebook isn't responding.Do you want to close it ပြတဲ့စာ ​ပေါ်လာပြီဆိုရင်​ အလွန်​စိတ်​...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:36 AM No comments:
​ဖေ့စ်​ဘုတ်​မှာ​နောက်​ဆုံး​ပေးတဲ့ Comments အထက်​​ရောက်​​နေ​အောင်​ လုပ်​နည်း
🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 ••• ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​​ပေါ်မှာ မိမိ​ပေးလိုက်​တဲ့ Commentအခြားအ​ကောင့်​​တွေ ရဲ့အ​ပေါ်က​ရောက်​ နေ​အောင်​လုပ်​ထားချင်​တဲ့ မိတ်​​...
​ဖေ့စ်​ဘုတ်​မှာ​နောက်​ဆုံး​ပေးတဲ့ Comments အထက်​​ရောက်​​နေ​အောင်​ လုပ်​နည်း Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:06 AM Rating:5🇲🇲 မင်္ဂလာပါ 🇲🇲 ••• ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​​ပေါ်မှာ မိမိ​ပေးလိုက်​တဲ့ Commentအခြားအ​ကောင့်​​တွေ ရဲ့အ​ပေါ်က​ရောက်​ နေ​အောင်​လုပ်​ထားချင်​တဲ့ မိတ်​​...
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) at 4:06 AM No comments: